Meesha dunida ugu kulul waxa ay ku taal Djibouti - BBC Somali
Meesha dunida ugu kulul waxa ay ku taal Djibouti
Image caption Maxamed Axmed waxa uu ku nool yahay harrada Casaal ee dalka Djibouti
Waxaan qarka ka joogaa harrada la yiraahdo Casaal, waa ay gubaneysaa, laakiin xitaa ma aanan iman karin halkan maanta oo kale xillagan oo ay tahay duhur.
Haddii xaqiiqdii aanay ahayn, tani waa xilliga winterka ee qaboobaha Djibouti. Xilliga kuleylaha heerka kuleylka biyaha Harradan waxa uu gaaraa soddon iyo xoogaa. Dabeyl aad u kulul, Qorax ku gubeysa, xaqiiqdii waa sidii in la dubayo haradan Volkaniga ah. Waxaana banaanka usoo baxay cusbo oo ka sameysmeysa kor.
Cali Xamiid ayaa I tusaya sida loo qodo cusbada, sidaasi oo oo aabihii iyo awoowyadii ay u sameyn jireen, iyagoo isticmaalaya dhagax weyn oo madow, waxa uu yiri waa qalabka reer miyiga.
Intii aanay qalabka jirin waxaan isticmaali jirnay dhagxaantan oo kale oo aanu ku garaaci jirnay cusbada si aan uga jajabino waxa ku dhegan, tani waa waxa ay reer miyigu ganacsi ahaan u istcimaali jireen oo ay cunto ugu soo iibsan jireen qoysaskooda.
Xitaa ileyska ka imanaya qoraxda ayaa dib uga noqonaya cusbada, oo sidii barafkii oo kale u eg.
haa isla marka ay qoraxdu soo baxdo waxa ay ku dhufataa cusbada kadibna waa ay dhalaalisaa. Waxa ay ka sameyneysaa indhahaaga cadaan.
Marka aad halkan biyaha usoo dhawaatana, iyadoo kuleylkaasi oo dhan uu jiro, ma waxaad dooneysaa inaad biyaha quusto ama aad cabto?
Dhulka nagu hareereysan waa buuro midab huruud ah leh oo waaweyn, oo halkan kasoo baxa , iyadoo ah meesha ugu hooseeysa qaaradda Afrika oo dhan. Aad ayay u kulushahay, waana ay adagtahay inaad ku bedbaado halkan.
Guriga Cali waxa uu ka sameysan yahay alwaax. Isagoo ku tiirsan ayaa Ali waxa uu iiga waramay xaaladda biyaha.
Halkee ayaad biyo aad cabtaa ama ku qubeysato ka heshaa? Biyaha meel dheer ayaa laga keenaa, ilaa 50 km dowladda ayaa keenta toddobaadkiiba mar, laakiin haddii baaburka keena uu soo daaho maalinta sideedaad looma dulqaadan karo . Bal aan eegno gurigaa dhexdiisa, ilaa intee ayaa biyahan ay tahay in la isticmaalo
Way adagtahay inaan galno guriga sababtoo ah caruur badan ayaa daadsan.
Adiga iyo sideed caruur ah waxaad heshaan saddex jiiragaan oo waaweyn oo biyo ah., markaa hal maalin unbaa kasoo wareegtay markii la idiin keenay mid ka mid ahna jiiragaanada ma maqleysaa waa uu dhamaaday.
Sida aad ujeedo ma daahayo, maalmaha ugu horeeya ee biyuhu ay yimaadaan , waxaan ku isticmaalnaa dhaqmo iyo qubeys, biyo badan ayaan istcimaalnaa, afarta maalin ee u danbeysa waa cabitaan oo keliya
Cuntada ayaa iyana ah dhibaato kale oo heysata Ali, dhamaan qoysaska waxa ay dhalgan ugu jiraan sidii ay ui noolaan lahaayeen halkan harada Assal, cusbada laga iibsan jiray ayaa hoos u dhac weyn uu ku yimid, qiimaha aad ayuu hoos ugu dhacay.
Dad aad u yar ayaan doonaya inay sii wadaan ganacsigan reer miyiga
Maxamed Axmed waxa uu cusbada u qaadaa waddanka Ethiopia iyadoo cadceedu ay aad u kulushahau, waa safar ku qaadanaya muddo shan iyo toban maalmood ah, waxa uu yiri waxa aan sameynayay daqiiqadihii ugu danbeeyay aad ayay u kulushahay, laakiin xaqiiqdii si degan ayuu u dhexmaraa dhulkan dhagaxa ah ee aadka u kulu.
Maxamed waxa uu sheeghay in aanu kala jecleyn toddobada geella ah ee uu leeyahay, laakiin Luelita ayaa waxa uu sheegay in mar walba uu hor mariyo. BAND 12 UPSOT
Mararka qaar waxay u baahan tahay in la dhiiri geliyo marka safarka noocan ah oo kale la gelayo, sida in heesaha geela ee caanka ah loo qaado, inta ay sii jiri karto qaab nololeedkan qarniyada soo jiray duqoobay.